ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: ဘလော့မှာ Layout-Java Script မှာ ကုဒ်ထည့်နည်း (အသစ်များအတွက်သာလျှင်)
ဘလော့မှာ Layout-Java Script မှာ ကုဒ်ထည့်နည်း (အသစ်များအတွက်သာလျှင်)
မင်္ဂလာပါခင်္ဗျားးးးးးးးးးးးးးး သည်နေ့တော့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလာလို့ အံ့သြမိသလို... စာနာမိပါတယ်... ဘလော့ကို အသစ်လုပ်တဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်ပါ သူဟာ ခုမှ လုပ်ပုံ ရ့ပါတယ်.. ဘာဆို ဘာမှ ကိုမသိသေးးတဲ့ ပုံစံနဲ့ မေးလာတော့... အချိန်မနည်းပေး ဖြေယူရပါတယ်.. ဘလော့ရဲ့ အရေးပါတဲ့ Layout ကိုတောင်မသိဘူးလေ.. ဒါကြောင့် သည်ပို့စ်လေးကို ချင်ချင်းထရေးဖြစ်တာပါ... သိကြသူတွေအတွက်တော့ ကျော်သွားလိုက်ပါနော်.. လုံးလုံးမသိသေးသူတွေအတွက်ပါ..
ပုံလေးတွေ နဲ့ ရှင်းပြပါ့မယ်.... ဘလော့တစ်ခု လုပ်ပြီးးတာနဲ့ လိုခြင်တဲ့ကုဒ်တွေကို
►6. အောက်ကပေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကို ကော်ပီယူ ထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ ကုဒ်ထည့်နည်းကို သေခြာ ရှင်းပြပေးဖို့ပါ.... ကဲစမယ်...နော်
အဆင့် (၁)....... ပုံလေးတွေ သေခြာ ကြည့်ပါ...
ပုံမှာ ပြထားသလို သုံးထောင့်မျှားချွန်လေးကနေ ကလစ်လိုက်ပါ အဲထဲမှာ layout ဆိုတာ ရှိပါတယ်..ကလစ်ပေးရပါ့မယ်... html ကိုသွားဖို့ဆိုရင်လဲ သည်ကတေဘဲ Template ဆိုတာကလစ်ပြီးသွားရပါတယ်..... နောက်ထပ်....
အဆင့် (၂) ...........အောက်ကပုံလေးကို ကြည့်ပါ
layout ရောက်တာနဲ့ AddaGadget ဆိုတာရှိပါတယ်... ကုဒ်တွေ ထည့်ဖို့ ကလစ်ပေးရပါမယ်..
အခြား မန်ဘာတို့..Labels တို့..စသဖြင့် ထည့်စရာတွေလဲ ထည့်နိုင်ဖို့ AddaGadget ကိုကလစ်လိုက်တာနဲ့ တွေ့ပါလိမ့်မယ်.. အတော်များများရှိပါတယ်....ဆက်သွားမယ်..
အဆင့် (၃) .............addagadget ကိုကလစ်ပြီနောက် ကုဒ်ထည့်ဖို့ဘောက်ကျလာမယ်...
Title နေရာမှာ မိမိတို့ ကုဒ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ထည့်ပေးပါ.. မထည့်လဲ ရပါတယ်... ကြိုက်သလိုပေါ့.
ကုဒ်တွေဟာ ပုံရဲ့ကုဒ်တွေ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အပေါ်က Rich Text ဆိုတာလေးကလစ်တာနဲ့
ပုံလေးကို တန်းမြင်စေနိုင်ပါတယ်.. ကုဒ်တွေကို မိမိဆိုဒ်နဲ့ သင့်တော် လှပသလို အကျယ်အ၀န်း
အမြင့် စသဖြင့် ချိန်ကိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်...
အဆင့် (၄) ............နောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့ layout စာမျက်နှာပေါ် တင်ထားတာ ရောက်ပါပြီ။
တင်ထားတဲ့ ဟာလေးကို မိမိတို့ ဘလော့မှာ ထားခြင်တဲ့ နေရာကို မောက်လေးနဲ့ ဖိဆွဲပြီးနေရာချပေးလိုက်ပါ။ ဥပမာ ။ ။ နာရီဆိုပါက အပေါ်ဆုံးမှာ ပေါ့.. နှစ်သက်သလို နေရာ ချိန်းပေးနိုင်ပါတယ်..နော်.
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 1:34 AM